China 7 Inch Double Row Diamond Grinding Cup Wheels ho an'ny Angle Grinder Manufacturing and Factory | Bontai
Kodiaran'ny kaopy diamondra mirefy 7 mirefy ho an'ny fanotoana zoro
7 Inch Double Row Diamond Grinding Cup Wheels dia ampiasaina amin'ny fikosoham-bary isan-karazany granita, marbra, gorodona vita amin'ny simenitra. Mety hifanaraka amin'ny milina fikosoham-bary tànana sy milina fitotoana gorodona. Ny fatorana metaly samihafa dia azo atao araka ny gorodona samihafa. Fanohanana manokana ho an'ny fitrandrahana vovoka voajanahary sy nohatsaraina.
refy: Savaivony 4", 5", 7"
Fampiharana: Ampifanaraho amin'ny fikosoham-bary na fikosoham-bary mba hanototra ny gorodona rehetra.
Kodiaran'ny kaopy diamondra 7 mirefy laharana roa
4", 5", 7" (Ny habe hafa dia azo namboarina)
Ho an'ny fitotoana ny karazana simenitra, terrazzo, granita ary marbra
1. Ny famaritana dia feno sy miovaova. Miaraka amin'ny karazana sy habe samihafa mahafeno ny filan'ny mpanjifa maro.
2. Ny fifandanjana tsara dia miantoka ny fikosoham-bary tsara indrindra.
3. Aza asiana marika na oviana na oviana ny vato ary dory ny ambonin'ny vato.
4. Ny fifandanjana tsara dia miantoka ny fikosoham-bary tsara indrindra.
5. Lava ny androm-piainany sy ny fahombiazany.
6. Vidiny mifaninana sy kalitao ambony.
7. Fahombiazana miasa avo.
Ity vokatra ity dia tsara ho an'ny fikosoham-bary matevina sy masonry. Famolavolana andalana roa ho an'ny fanesorana fitaovana mavesatra kokoa noho ny kodiarana tokana, fiainana maharitra, fitoniana avo, fanesorana fitaovana haingana kokoa ary mamokatra kokoa.
Ity kodiaran'ny diamondra ity dia manana diamondra avo lenta, fotoana maharitra, fanesorana fitaovana mahery vaika, ary haingana be amin'ny masonry, vato ary beton! Hetsika fanapahana. Ny endrika porosity dia manampy amin'ny fitazonana sy fampangatsiahana ny lamina fanapahana ary mampihena ny fitafy, ka miteraka endrika diamondra tsy miova.
teo aloha: Kodiaran'ny kaopy diamondra 5 mirefy laharana roa
Manaraka: Kodiaran'ny kaopy Diamond Turbo 4 mirefy ho an'ny Beton & Vato
Ny kodiaran'ny kaopy diamondra dia natao hampiasaina amin'ny fikosoham-bary maina amin'ny simenitra sy fitaovana hafa masonry mba hanalefahana ny faritra tsy mitongilana sy hanesorana ny tselatra. Ny matrix diamondra dia manome 350x ny fiainan'ny abrasive mahazatra ary mamela ny fanesorana fitaovana mahery vaika kokoa. Ny sisin'ny diamondra andalana roa amin'ireo lelany ireo dia manome fanalana fitaovana mavesatra ary manome fiainana lava kokoa.
Kodiarana fikosoham-bary 4 mirefy
Kodiaran'ny diamondra 7 mirefy
China Manufacturer Stone Diamond Grinding Cup Wheel for Flooring Grinding
Kodiarana fikosoham-bary miendrika kaopy
Diamondra Abrasive Grinding Discs
Kodiarana sakana diamondra
Diamondra fikosoham-bary kapila
Kodiaran'ny kaopy diamondra ho an'ny fikosoham-bary
Kodiaran'ny kaopy diamondra Kodiaran'ny kaopy diamondra
Kodiarana mpanapaka diamondra
Kodiarana fanapahana diamondra
Diamant Flooring Discs
Diamant Grinding Disc ho an'ny Beton
Diamant Grinding Discs
Fitaovana fanotofana diamondra
Kodiarana fikosoham-bary ho an'ny vato
Kodiaran-kodiarana boribory diamondra ho an'ny granita
Kodiarana Diamond Turbo Cup
Kodiarana fikosoham-bary roa
Kodiaran'ny kaopy roa andalana
kodiarana kaopy misy andalana roa
Kodiaran'ny diamondra roa sosona mahomby kokoa
fizarana roa andalana
Kodiarana fanosehana gorodona
Disc Fitotoana gorodona
Fikosoham-bary sy fikosoham-bary
Kodiarana kaopy diamondra fizarana
Kodiarana fitotoana andalana Tubo
Kodiarana fikosoham-bary turbo diamondra
7 ″ 6 fizarana TGP Diamond kodia ...
L endrika abrasive diamondra fikosoham-bary kodiaran'ny ...
7 mirefy andalana roa diamondra kaopy fitotoana kodia fo ...
7 mirefy Turbo fizarana Diamond Cup Wheel ho an'ny Conc...